Wararka - Suuqa biirka farsamada gacanta ee hoos yimaada cudurka faafa iyo tallaabooyinka ka hortagga ah ee ay qaadatay shirkadeena
Suuqa biirka farsamada gacanta ee hoos yimaada cudurka faafa iyo tallaabooyinka ka hortagga ee ay qaadatay shirkadeena
Tan iyo bishii Jannaayo ee sanadkan, cudurkan waa uu sii faafay, waxaana la xiray xarumaha ganacsiga, baararka, maqaayadaha iyo goobaha ay dadku isugu yimaadaan. Ilaa hadda, cudurku wuxuu socday muddo nus sano ku dhow, kaasoo horseeday hoos u dhac dhaqaale oo caalami ah iyo tiro badan oo shaqo la'aan ah; Marka laga soo tago suuqyada kale ee caalamiga ah maaha kuwo rajo leh sababtoo ah arrimaha caalamiga ah; Iyadoo faafitaanka cudurkan, baarar badan, maqaayado, warshado farshaxan, iwm. ayaa joojiyay howlihii shaqo, iwm. Khasaaraha tooska ah ee ka dhashay warshadaha biirka farsamada ayaa ah mid aan la qiyaasi karin; tani waxay keentay in si lama filaan ah u kordho iibka qalabka biirka ee farsamada gacanta. Si loo yareeyo saameynta cudurka, shirkadeena waxay cusbooneysiisay tallaabooyin taxane ah, sida soo socota:
1. Kor u qaadida alaabta si loo hagaajiyo tayada qalabka biirka iyo qiimaha lagu daray qalabka; Injineeradayadu waxay ku dabaqaan shuruudaha macaamiisha si ay u farsameeyaan qalabka wax soo saarka, si ay macaamiishu khibrad fiican u yeeshaan;
2. Dib u habeyn ku samee shabakada oo tus macaamiishayada alaabtayada ugu fiican;
3. Tababar injineeradayada iibka kadib si ay ugu adeegaan macaamiisha;
4. In la dhimo qiimaha qalabka si loo iibiyo taageero macaamiil badan si ay u bilaabaan ganacsiga khamriga sida ugu dhaqsaha badan, iyo in la dhimo qiimaha iyada oo ku saleysan horumarinta tayada alaabta;
5. Hagaajinta habka gudaha ee shirkadda;
Waxaan rajeyneynaa inaan fiicnaanno oo aan u adeegno macaamiil badan;
Caafimaad ahaan, waxa la caddeeyey in cabbitaanka dhexdhexaadku uu caafimaad dhab ah u keeni karo jidhka bini’aadamka. Huaian waxa ay yaraysaa kolestaroolka, waxa ay xoojisaa garaadka,waxana ay kicisaa waxyiga. Haddii Zhang uu yahay qof weyn oo gaadhay da'da khamriga ee sharciga ah oo jecel inuu ku raaxaysto koob khamri ah Pinot Noir habeen kasta, Zhang waa inuu awood u yeeshaa inuu qiimeeyo saamaynta yaabka leh ee cabitaanka dhexdhexaadka ah. Si kastaba ha noqotee, haddii Zhang uu jecel yahay inuu cabbo khamriga, markaas Zhang waxaa laga yaabaa inuusan fursad u helin inuu si fiican u cabbo. Aynu eegno faa'iidooyinka cabitaanka dhexdhexaadka ah ee jidhka bini'aadamka. Dumens Asian Beer Academy.
Horumarka joogtada ah ee tignoolajiyada soo saarista biirka casriga ah waxay siinaysaa fursado badan oo lagu qancinayo macaamiisha dhadhankooda kala duwan iyo shuruudaha aan fiicnayn. Waqtigan xaadirka ah, iyada oo qoto dheer oo aan la koobi karin iyo horumarinta dib-u-habaynta iyo furitaanka, biirka mugdiga ah ee soo jiidashada caadiga ah ayaa si dhakhso ah u soo galay suuqa Chen Mou, waxayna sii kordheysa u noqotay isbeddel ay dadku ku baxsadaan nolosha casriga ah.